Annaga Ku saabsan - Shirkadda Qingdao New Asia Pacific Group Company
Qingdao New Asia Pacific Group Company waxaa laga asaasay 2000 magaalo xeebeed qurux badan Qingdao. Gaadiidka gudaha iyo gaadiidka badda waa mid aad u sahlan.
Warshaddeenu waxay leedahay awood farsamo iyo koox farsamo oo xoog leh. Badeecadeenna waxaa laga iibiyaa dalal badan sida Japan, Malaysia, USA iyo wadamo badan oo Yurub ah. Badeecadeenu waxay leeyihiin tayo wanaagsan iyo qiimo tartan.
NAP waxay u hogaansamaysay qiyamka shirkadeed ee macaamiisha marka hore, wadashaqayn, daacadnimo, kalgacal iyo dadaal. Kooxaheenna wax iibiya waxay siinayaan macaamiishooda adeeg wanaagsan.
Waxyaabaha ugu waa weyni waa badeecad ilaalin ah sida gaashaanka wajiga, dharka loo adeegto, dharka ilaalinta, goonnada la iska tuuro, goonnada qalliinka, xirmooyinka tijaabada degdega ah (cajalad tijaabo ah) iwm. CE ama FDA shahaadada waa la heli karaa.
Gaashaanka wejiga waxaa loo isticmaalaa nolol maalmeedka iyo wax soo saarka maalinlaha ah. Waxaa loo adeegsan karaa aqoon isweydaarsiga, xafiiska shaqada, jikada, wadada roobka, xaflada weyn, kulanka iwm.
Saamaynta kahortagga: boodhka, borotiinka ka soo baxa jikada, ka hortagga buufiska, anti-ceeryaanta, dawada-daadinta, sahayda aan dawooyinka ahayn, maaha caafimaad.
* anti-biyaha, anti-oil, boodhka lidka-boodhka, isticmaalka balaaran ee qaybaha kala duwan. Isticmaal keli ah, culeys khafiif ah, Biyo-celis, Fasalka cuntada.
Astaamaha waxay ka hortagaan cabitaannada, dufanka iyo saliidaha.
Laydh, habboon, ciid-caddeyn, saliid-caddeyn, wasakh-caddeyn.
* Waa mid raqiis ah laakiin la is qurxin karo, waana Acid iyo Alkali iska caabbinta, oo loo adeegsan karo baaritaanka kiimikada, ilaalinta warshadaha iyo beeraha, dheehista, kalkaalinta iyo wixii la mid ah.
Hawsha oo dhan iyo walxaha ceyriinka ah waxay gaarayaan heerarka ugu sareeya.
Waxay leedahay waxqabadka kahortaga soo-dhexgalka wanaagsan, hufnaanta shaandhaynta sare, iska caabbinta qoyaanka dusha sare, xoogga iyo firfircoonida hawada, taas oo u oggolaaneysa inay si wax ku ool ah uga hortagto biyaha iyo boorka.
Tuurida go'doonka ah ee la tuuray
Dharka go'doominta ee la tuuri karo waa gogosha aan nadiifka ahayn si loo siiyo caqabad dhexdhexaad ah bukaanka' dareeraha jirka iyo dheecaanka jirka. Waxaa badanaa loo istcimaalaa daaweynta bukaanka iyo kormeerka ka hortagga faafa ee goobaha caamka ah. Waxaa sidoo kale si weyn loogu isticmaali karaa beeraha, xoolaha, ilaalinta deegaanka, iyo beero kale.
Waxyaabahayaga loo yaqaan 'Gowns' waxaa si ballaaran looga jaray laabta iyo jaakadaha qol yar. Dhar jilicsan oo biyo-leh ayaa muujinaya tikniyoolajiyad heer sare ah oo siisa xirmooyin u adkaysata kala-baxa. Waxay kaa dhigaysaa xasilloonida inta aad shaqeyneyso, waxay kaa caawineysaa inaad dareento kalsooni iyo xakameyn.
Tayo wanaagsan iyo tartan tartan.
Xirmooyinka Tijaabada Degdega ah / Kateetarka Tijaabada
Cudurka Coronavirus 2019 (COVID-19) IgM / IgG Antibody Test waa mid dhakhso ah, tayo leh oo ku habboon immunochromatographic in vitro dib u eegis ku ogaanshaha kaladuwan ee ka hortagga unugyada IgM & IgG ee fayraska COVID-19 ee ku dhaca bini-aadamka, plasma ama samballada dhiigga oo dhan oo laga helo bukaanka qaba cudurka COVID-19. Aaladda waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo go'aan ka gaarista soo-gaadhistii ugu dambeysay ama hore ee fayraska COVID-19 ee la socodka heerka cudurka ka dib caabuqa COVID-19. Qalabkaan degdega ah ee tijaabinta ayaa si fiican u iibiya.
Haddii wax su'aalo ah la weydiiyo fadlan ha ka labalabeyn inaad la xiriirto qofka wax iibinaya. Emayl:Cynthia@napgroup.net Soo dhowow weydiimahaaga!
Dharka Ilaalinta, Dharka Caafimaadka ee la tuuri karo, Biyo-caddeynta Biyaha, Go'yaal ilaalin ah, Dust-Proof Pet Face Shield, Biyaha-Proof Hdpe Apron,